နည်းပညာ မှတ်တမ်း: March 2008
Cool website (13)
Free key (6)
Gmail lite (1)
speed up (6)
/ 04:02 / Comments: (0)
Gtalk မှာ တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ဦးတည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြီး chat နေချိန်မျိုးမှာ တစ်ခြား online fri. ၀င်လာတတ်ပါတယ်။ ပြန်မဖြေရင်လည်း တစ်မျိုးတစ်မည် အထင်ခံရမယ်။ ပြန်ဖြေနေရရင်လည်း အာရုံလွင့်တော့မယ်။ ဒါဆို အနားမှာမရှိဘူးလို့ ပြောပေးမယ့် galways idel ကိုတင်ထားကြရအောင်။
galways idel ကို ဒီမှာ download n install လုပ်ပေါ့။ ပြီးရင် taskbar မှ gtalk icon ပေါ်right click လုပ်ပြီး always idle ရွေးထားပေါ့။ မလိုအပ်တော့ရင် normal or never ပြန်ပြောင်းထားနိုင်ပါတယ်။
galways idel က သင့်ကိုယ်စား လှည့်စားပေးဘို့ plug in ထည့်ထားလိုက်ပါလား...
/ 03:56 / Comments: (1)
gtalk ကို တစ်ခုထက် ပိုသုံးရမယ့် အခြေအနေမျိုး ကြုံတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ခုထက်ပိုသုံးချင်ရင် ဒီလိုလေးလုပ်ထားလိုက်ပါ။
gtalk icon ပေါ်right click/properties ကိုသွားပါ။ gtalk properties dialog box မှ shortcut ကိုသွားပါ။ Target box မှာ "C:\_Program Files\_Google\_Google Talk\_googletalk.exe" /startmen0u/ ဒီ extention လေးနောက်က space/nomutex ရိုက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ok ပေါ့။ space က ( /nomutex)ပါ။ spacebar ပုတ်ရုံပါဘဲ။
ရပါပြီ ရှိသမျှ account တွေနဲ့ login ၀င်ပြီး chat နိုင်ပါပြီ။
How to use zawgyi on the gtalk?
/ 03:51 / Comments: (16)
Gtalk ရဲ့ setting/general/change font/zawgyi/ok ပြီးပြီဗျာ။ မြန်မာလိုချတ်တော့ ပိုပြီး စုံစစေ့စေ့ ပြောလို့ ကောင်းတာပေါ့။
/ 02:42 / Comments: (0)
Gmail lite သည် gmail ကိုလျှင်မြန်ပေါ့ပါးစွာ အသုံးပြုနိုင်အောင် ရေးဆွဲထားသည့် project တစ်ခုဖြစ်သည်။ Gmail lite ဟာ gmail လောက် bottom မစုံလင်ပေမယ့် နေ့လည်ဘက်မှာ တစ်ကမ္ဘာရဲ့ request လုပ်မှုကြောင့် အင်တာနက်နှေးကွေးနေချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင် glite နဲ့ gmail access လုပ်ရင် standard ထက်ပိုမြန်ဆန်စေပါတယ်။ bottons တွေဟာ gmail နဲ့ သုံးတာခြင်း မကွာပါဘူး။ attach file ကို 1mb limit တော့ကန့်သတ်ထားတယ်။
Gmail lite ပေါင်းများစွာ တင်ထားကြပါတယ်။တစ်ချို့သုံးဖြစ်သမျှ ကတော့
ဒါတွေ အဆင်သင့်သလို ၀င်သုံးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးရင်လည်း လွယ်ကူပါတယ်။
Update: Dead link တွေ ဖယ်ထုတ်ပြီး သုံးနိုင်တဲ့ links တစ်ချို့ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ Blocked ဖြစ်နေတာကိုတော့ ချန်ထားပါသေးတယ်။
http://glite.mysteryzillion.com/# ဒီ glite ကိုတော့ မြန်မာလို စာပို့ရင်သုံးပါတယ်။
font နဲ့ keyboard ရှိပြီးသားသူအတွက် မလိုပေမယ့် မရှိရင် (သို့) cyber cafe ၊ သွင်းရန်အခက်အခဲရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဒီ glite က ဖြေရှင်းပေးပါတယ်။
font နဲ့ keyboard ရှိပြီးသားသူဟာလည်း gmail ရဲ့ setting ကိုသွား general/outgoing message encoding/use (UFT-8) ပြောင်းပြီးမှ glite or gmail standard မှာ မြန်မာစာသုံးရပါတယ်။
ဒီလင့်ခ်လည်း gmail ပွင့်ပါတယ်။လွယ်ကူသင့်လျှော်ရာ ရွေးချယ်သုံးတော့ အချိန်ကုန် လူပန်း သက်သာစေတာပေါ့။
Labels: Gmail, Gmail lite, Google
By pass for stop! access denied ( 1 )
/ 19:42 / Comments: (0)
အချို့သော website များသည် အများပြည်သူ ကြည့်ရှုရန် မသင့်လျှော်ရ်ျ သက်ဆိုင်ရာ ISP မှ blocked လုပ်ထားတတ်ကြသည်။
www.youtube.com တွင် နည်းပညာ၊လေ့လာစရာ၊ရယ်မောစရာ အခြားများစွာသော အုပ်စုကွဲများဖြင့် ဗီဒီယိုပြကွက်များ အခမဲ့ လွှင့်တင်၊ကူးယူကြည့်ရှုခွင့်ပြုထားသည်။
အချို့ ဗီဒီယိုပြကွက်များမှာ အများပြည်သူ ကြည့်ရှုရန် မသင့်လျှော်ရ်ျ သက်ဆိုင်ရာ ISP မှ webတစ်ခုလုံး ဘန်းလိုက်ရသည်။
သို့သော် နည်းပညာ၊လေ့လာစရာ၊ရယ်မောစရာ များကို ကြည့်ရှုကူးယူနိုင်သော နည်းလမ်းအချို့တော့ရှိပါသည်။
မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများပါ မထိခိုက်စေသော ကိစ္စရပ်များအတွက်သာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
အောက်ပါနည်းလမ်းများကို သိမှီသမျှ စုဆောင်းထားမိပါသည်။
http://proxy.org/ က်ျဆိုဒ်တွင် webproxy ပေါင်း 20000 ခန့်စုစည်းထားပါသည်။
အကောင်းဆုံးတို့သည် အမြဲတမ်းပြောင်းလည်းနေရ်ျ up to date ရွေးချယ်ပေးထားသည်များကို အစဉ် ဂရုပြုကြည့်သင့်သည်။
webproxy နှင့်ပတ်သက်လျှင် အတော်အတန်ပြည့်စုံသော ဆိုဒ်လေးဖြစ်သည်။URL box တွင် မိမိသွားလိုသော လိပ်စာကိုရိုက်ရ်ျ GO ကိုနှိပ်ရုံဖြင့် ramdom proxy ဖွင့်ယူနိုင်သည်။
မိမိနှင့်သင့်တော်ရာ နှစ်သက်ရာ proxy ကို ကလစ်လုပ် ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးသည်။
အားနည်းချက်မှာ connection speed ကျသွားခြင်းပင်။ တစ်ဆင့်ခံတို့ဧ။် သဘောပါ ။ ။
၄င်း ဆိုဒ်မှ ဘာသာပြန် web page box ကို အသုံးပြုခြင်းပါ။
Translate webpage box တွင် မိမိသွားလိုသော လိပ်စာကိုရိုက်ပါ။ပြီးနောက် နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကား တစ်ခုခုကိုရွေးပါ။
translate ကိုနှိပ်ပြီး သွားခြင်းပင်။ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင် များအတွက် သင့်လျှော်ပါတယ်။
သူ့အားနည်းချက်က ထို web ရဲ့ စာများဖတ်ရန် ဘာသာစကား ပြောင်းလည်းနေလို့ မျက်စိနောက်ရတာပါ။
ဒီဆိုဒ်မှာ hostname to ip and ip to host name ပြောင်းပေးပါတယ်။
ဆိုလိုတာက မိမိသွားလိုသော လိပ်စာဟာ ip နဲ့လဲ ဖွင့်လို့ရတာကိုပါ။
သွားလိုသောလိပ်စာကို host name box မှာရိုက် ပြီးရင် ip ကို copy/paste လုပ်ပြီး ဒိုးပေါ့။
အားနည်းချက်ကတော့ အချို့ဆိုဒ်ကို ip ပါ ဘန်းထားတာကို ကြုံရတယ်။
Google/yahoo search engine မှာ ရှာရင် URL ဘေးမှာ cached ဆိုတာတွေ့နေကြပါ။
အဲဒီ cached လေးကလစ်လုပ်ပြီး သွားလဲရပါတယ်။
အားနည်းတာက အဲဒီ webpaqge ကနေ တခြား webpages ကူးရင် block ပြန်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
one page ဘဲ အဆင်ပြေတတ်တယ်။
မိမိကွန်ပြူတာမှာ proxy software run ပြီးသုံးတာပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲလ် နှစ်ခုတော့ သိထားတယ်။
ပထမက ။ ။ www.your-freedom.net
free user တောင် account ရှိရတယ်။64k limited လုပ်ထားတယ်။
java run time ရှိရသလို version က out of date ဖြစ်မြန်တယ်။
dialup သမားတွေအတွက် မဆိုသာပေမယ့် dsl တွေတော့ စိတ်မရှည်စရာပါ။
foreign money သွင်းနိုင်ပြီး unlimited သုံးနိုင်သူတွေတော့ တစ်မျိုးပေါ့။
online game တောင် ကစားနိုင်တယ်။အခြား စွမ်းရည်တွေလဲ ရလာမှာကိုး။
ဒုတိယက ။ ။ Ultrasurf
http://www.wujie.net/downloads/ultrasurf/u.zip အဲဒီမှာ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ free ပေးတယ်။
ဖိုင်က 140k မပြည့်ဘူး။ Option/proxy setting မှာ ကိုယ့်ရဲ့ host n port ရိုက် OK ပေါ့။
နှစ်သက်တာက ဖိုင်နေရာမယူဘူး။ desktop မှာတင် ကလစ်လုပ်သုံးနေရုံဘဲ။
အားနည်းသေးတာက failler ဖြစ်ပြီးရင် restart con. ပြန်မလုပ်ပေးဘူး။ con. down ချိန်မျိုးမှာ ဂရုစိုက်ရတာပေါ့။
အခြားနည်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒီ ၅ခုနဲ့တောင် အတော်လေး အဆင်ပြေစေပါတယ်။
Zawgyi-One for firefox Browser
/ 19:07 / Comments: (2)
Tool-> Content ကို ၀င်လိုက်ပါ..
Font And Colour တွင် Advanced ကိုဝင်ပါ...
Font တွေကို Zawgyi-one လို့ပြောင်းလိုက်ပါ...
Font Size ကိုလည်း သင့်တော်ရာပြင်လိုက်ပါ....
ပြီးရင် OK ပေါ့...
ကဲရပါပြီ... မြန်မာလို... Firefox တစ်ခုလုံး ဇော်ဂျီ font ဖြစ်သွားပါပြီ...
Zawgyi-One for IE Browser
/ 18:51 / Comments: (17)
Internet explorer မှာဇော်ဂျီ သုံးချင်ရင်
အရင်ဆုံး notepad ကိုဖွင့်ပါ...
ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ.... ပြီးရင် C:\_ie.css နဲ့သိမ်းလိုက်ပေါ့....
ပြီးတော့ IE ကိုဖွင့်...
Tool -> Folder option -> Accessibility ကို နှိပ်ပါ...
Ignore Font Style specified on web pages ကို check လုပ်ပါ...
Format documents using my style sheet ကို check လုပ်ပါ..
ပြီးရင် OK လုပ်လိုက်ပါ... OK ထပ်လုပ်ပါ..
မြန်မာလို... IE တစ်ခုလုံး Zawgyi font ဖြစ်သွားမယ်
Zawgyi-One Keyboard layout
/ 18:28 / Comments: (1)
မြန်မာလိုရိုက်လိုပါက Ctrl+Shift တွဲနှိပ်လိုက်ပါ… ဒါဆို မြန်မာ လက်ကွက်ပြောင်းသွားပါမယ်…
English လိုပြန်ပြောင်းလိုပါက Ctrl+Shift တွဲနှိပ်လိုက်ပါ.. English လက်ကွက် ပြန်ပြောင်းသွားပါမယ်…
မြန်မာ လက်ကွက်တွင် Ctrl+Alt နှိပ်ပြီး စာရိုက်ပါက keyboard လက်ကွက်ပုံတွင်ပြထားသော အပြာရောင်စာလုံး အောက်ဘက် ဖြစ်ပြီး
Ctrl+Alt+Shfit နှိပ်ပြီး စာရိုက်ပါက keyboard လက်ကွက်ပုံတွင် ပြထားသော အပြာရောင်စာလုံးအပေါ်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်..
MCPA Excellent Award ဆုကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ကွန်ပြူတာပညာရှင်အသင်း ၊ NLP language lap ၊ www.mmgreeks.org၊Internet ၊ internet cafe များနှင့် အင်တာနက်ဂျာနယ်တို့ကို ကျော်လွှားရ်ျ ဇော်ဂျီမြန်မာ ယူနီကုတ်အဖွဲ့က ရရှိသွားပါသည်။ အင်တာနက် တွင် အသုံးအများဆုံး ဖောင့်ဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
Keyboard Download And Install
/ 17:57 / Comments: (0)
Zawgyi Keyboard download အရင်ချလိုက်ပါ..
Zawgyi Keyboard Install လုပ်ပါ...
ပြီးရင် Logout လုပ်လိုက်...
taskbar မှာ Keyboard icon မတက်လာဘူးဆိုရင်
run-> intl.cpl -> Language -> Detail ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...
နောက်ထပ် dialog box တက်လာပါမယ်...
Advance -> Turn off advanced text services က check ဖြစ်နေပါမယ်...
keyboard icon လေး taskbar မှာပေါ်လာပါမယ်..
Font Download And Install
/ 17:49 / Comments: (0)
Zawgyi-One download အရင်ချလိုက်ပါ…
C:\_WINDOWS\_Fonts အောက်ထဲသို့ download ချထားသော zawgyi-one.ttf ကို paste လုပ်လိုက်ပါ…
ပြီးရင် font active ဖြစ်၇န်အတွက် zawgyi-one ကို double-click လုပ်ပြီးဖွင့်ကြည့်ပါ.. ပွင့်လာပြီးလျှင် ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ..
ဇော်ဂျီဖြင့် ရေးသားသောစာများ ဖတ်နိုင်ပါပြီ။